Iinkampani zaseTshayina zikhokelela kwizicelo zomhlaba jikelele ze-5G | I-Androidsis
Ingxelo eyenziwe yi-IPlytics, inkampani yedatha yelungelo elilodwa lomenzi wechiza, ibonisa oko Iinkampani zobuchwephesha zaseTshayina zikhokelela ekusetyenzisweni kwelungelo elilodwa lomenzi le-5G, kunye noHuawei kwindawo yokuqala.
Imibutho yaseTshayina ipasise isishwankathelo uninzi lwe-5G olubalulekileyo lwe-Patent kunye neMigangatho yokusetyenziswa kwezakhelo ezifanayo ekupheleni kuka-Epreli, ukubalwa kwemali Iipesenti ezingama-34 zehlabathi zidibeneyo, ibonisa ulwazi.
Ngokweenkcukacha, Itekhnoloji enkulu yaseTshayina iHuawei idlale indima enkuluNgokubanga i-15% yamalungelo awodwa omenzi wechiza.
IHuawei ikhokelela kwinqanaba lokuma kweefemu ezivelisa ezona zicelo zepatent ze5G zehlabathi
Amalungelo abalulekileyo ePatent (5G SEP) amalungelo awodwa omenzi wechiza anyanzelekileyo ukuba nayiphi na inkampani iya kuyisebenzisa xa iphumeza ilayisensi yetekhnoloji ye5G esemgangathweni. Ngaphandle kwabo abayi kuba nakho ukuseka iisistim zabo okanye iinethiwekhi zonxibelelwano ngobuchwephesha.
Ezintathu zezigebenga zase China zaba yenye yezona zilishumi zenza i10G SEP patent, ngeHuawei ekhokela yonke iphakheji. Iifemu zaseTshayina iZET Corp kunye neChina Academy yeTekhnoloji yoNxibelelwano ngeTekhnoloji yeza kwindawo yesihlanu neyesithoba, ngokwahlukeneyo. Enye inkampani yaseTshayina kuluhlu yiGuangdong OPPO Mobile Telecommunication Corp, ene-207 5G SEPs.
Into enkulu elandelayo kwishishini lobuchwephesha ngokungathandabuzekiyo itekhnoloji ye5G. Olona khuphiswano lukhwaza kakhulu beluphakathi kwe China ne United States, Ngubani oza kuba ngowokuqala ukuphumeza itekhnoloji, ngaphandle kokuba amanye amazwe ambalwa, afana noMzantsi Korea, sele eyenzile, nangona ingekho kuyo yonke imimandla yabo.
Ukusuka kwindawo yokujonga izinto, I-China inethuba Kwaye yahlawuliswa ukuba iphumeze ngokusesikweni inethiwekhi yayo ye-5G kwi-Q2019 XNUMX. Nangona kunjalo, itekhnoloji isavavanywa kuwo omabini la mazwe, ke ayikabikho ukuthengisa okwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » NgoHuawei e-helm, iinkampani zaseTshayina zikhokelela kwizicelo zamalungelo awodwa omenzi wechiza we-5G
Kukuthini ukusetyenziswa kokwenza uphahla oluhle ukuba indlu (oyilo) olonyukayo ayisiyiyo eyakho.
Phendula ku yesu
Umhla wokukhutshwa kweGreen Fold uza kubhengezwa kungekudala